Falanqaynta Kulanka Sheffield United Vs Liverpool Ee Horyaalka Premier League
Home Falanqeynta Kulamada Falanqaynta Kulanka Sheffield United Vs Liverpool ee Horyaalka Premier League
Liverpool ayaa u safreysa Bramall Lane si ay u wajahdo kooxda ugu hooseysa Premier League Sheffield United, Reds ayaa wali la jahwareersan guuldaradii isbuucii hore ka soo gaartay Merseyside Derby ee Anfield.
Garoonka Bramall Lane
Sheffield United:- John Egan, Jack O’Connell, Chris Basham iyo Jack Robinson ayaa dhamaantood dhaawacan, waxaana taasi ay ka dhigeysaa Wilder inuu si doqonimo ah uga maqnaado xulashooyinka daafaca dhexe. Jayden Bogle sidoo kale waa uu ka maqnaan doonaa kulankaan, madaama dhibaatada daafaca Sheffield United ay bilaabeen inay aad ugu ekaadaan Liverpool
Sander Berge, Lys Mousset iyo Jack Rodwell ayaa dhamaantood dhaawac looga saaray sidoo kale.
Liverpool:- Kabtan Jordan Henderson ayaa lagu sameeyay qalliin dhaawac soo kabasho ah, waxaana lagu wadaa inuu garoomada ka maqnaado dhowr toddobaad. James Milner iyo Fabinho weli kuma soo laaban tababarka, laakiin Diogo Jota ayaa ku soo laabtay. Wuu soo muuqan karaa, haddii kaliya keydka laga fariisto. Ozan Kabak ayaa la filayaa inuu difaaca kala kaashan doono Nat Phillips.
Alisson Becker ayaa aabihiis shil ku waayey Brazil bartamihii asbuuca, laakiin dib ugama uusan safrin dalkiisii ​​hooyo. Klopp wuxuu ahaa mid aan ku faraxsaneyn haddii Alisson uu ciyaari doono habeenka axada.
Liverpool ayaa badisay 63, waxaana laga badiyay 45, 139kii kulan ee ay la ciyaareen Sheffield United.
Sander Berge ayaa hogaanka u dhiibay Blades kulan ka dhacay Anfield horaantii xilli ciyaareedkan, laakiin Liverpool ayaa ugu dambayn ciyaarta badisay, waxaana goolasha u kala dhaliyay Roberto Firmino iyo Diogo Jota
Previous articleFalanqaynta Kulanka Darbiga: Chelsea Vs Manchester United, Blues oo kulankan muhiimad gooni ah u leh
Next articleFalanqaynta Kulamada Horyaalka Serie A: Roma Vs AC Milan, iyo Inter Vs Genoa